ရုပ်ရှင်လောကထဲ စဝင်တုန်းက အနှိမ်ခံ အပြောခံခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်း – Suehninsi
ထွန်းထွန်းကတော့ အသက် ၁၆-၁၇ လောက် ၂၀၀၀-၂၀၀၁ က EXAMPLEZ မှာ သီချင်းတွေဆိုခဲ့ သီချင်းရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆို ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီ အနုပညာလောကထဲမှာ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ ပုံစံမျိုးစုံ ဘဝမျိုးစုံနဲ့ အနှစ်၂၀ ကျင်လည်ခဲ့တာ အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကြောင့်သာ
ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ထွန်းထွန်းက ဆိုပါတယ် ။သူ့ကို ယုံကြည်မှုရှိပေးကြတဲ့ Production တွေ Producer တွေနဲ့ အမြဲတမ်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးကြတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ထွန်းထွန်းက
ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။ ရုပ်ရှင်လောကထဲစဝင် ဦးကျော်ဟိန်းဆီရောက် တော့လည်း တချို့တွေက “သီချင်းပဲဆိုစမ်းပါ လိုင်းကြောင်ပြန်ပီ” ဆိုတာ မကြားတကြား ပြောတာတွေ, နာမည် တပ် ဒဲ့ စော်ကားခံရတာတွေကြားထဲကနေ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ကြိုးစားလေ့လာခဲ့ရတယ်. (ခုထိသင်ယူကြိုးစားနေဆဲပါပဲ) .
ခင်ဗျားတို့အထင်မကြီးတဲ့ Rap ဆိုတဲ့ ချာတိတ်တကောင် အနေနဲ့ ပထမဆုံး အကယ်ဒမီ ရတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့တယ်. ကြိုးစားခဲ့တယ်. ရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ အနုပညာလောကထဲဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံတွေကို ပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါကလည်း
သူ တစ်ယောက်တည်းတော်နေတတ်နေလို့ လုံးဝမဟုတ်ပါဘဲ ဆရာကောင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်း Team Work ကောင်းလွန်းလို့ သူ မြှောက်စားခြင်းခံခဲ့ရတာပါလို့လည်း ထွန်းထွန်းက
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချရေးသားထားပါသေးတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေ မှတ်ချက်ရေးသားထားကြတာတွေ့ရပါတယ် ။
ထှနျးထှနျးကတော့ အသကျ ၁၆-၁၇ လောကျ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ က EXAMPLEZ မှာ သီခငျြးတှဆေိုခဲ့ သီခငျြးရေးခဲ့တာဖွဈပွီး အခုဆို ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီ အနုပညာလောကထဲမှာ အနိမျ့အမွငျ့အတကျအကြ ပုံစံမြိုးစုံ ဘဝမြိုးစုံနဲ့ အနှဈ၂၀ ကငျြလညျခဲ့တာ အားပေးခဈြခငျကွတဲ့ ပရိသတျတှကွေောငျ့သာ
ရပျတညျနနေိုငျတာဖွဈတယျလို့ ထှနျးထှနျးက ဆိုပါတယျ ။သူ့ကို ယုံကွညျမှုရှိပေးကွတဲ့ Production တှေ Producer တှနေဲ့ အမွဲတမျးကူညီစောငျ့ရှောကျပေးကွတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကွေောငျ့လညျးဖွဈပါတယျလို့ ထှနျးထှနျးက
ပရိသတျတှကေို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ ။ ရုပျရှငျလောကထဲစဝငျ ဦးကြျောဟိနျးဆီရောကျ တော့လညျး တခြို့တှကေ “သီခငျြးပဲဆိုစမျးပါ လိုငျးကွောငျပွနျပီ” ဆိုတာ မကွားတကွား ပွောတာတှေ, နာမညျ တပျ ဒဲ့ စျောကားခံရတာတှကွေားထဲကနေ စိတျပိုငျးဖွတျပွီး ကွိုးစားလလေ့ာခဲ့ရတယျ. (ခုထိသငျယူကွိုးစားနဆေဲပါပဲ) .
ခငျဗြားတို့အထငျမကွီးတဲ့ Rap ဆိုတဲ့ ခြာတိတျတကောငျ အနနေဲ့ ပထမဆုံး အကယျဒမီ ရတဲ့သူဖွဈလာဖို့ ရညျမှနျးခကျြထားခဲ့တယျ. ကွိုးစားခဲ့တယျ. ရခဲ့တယျ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ အနုပညာလောကထဲဖွတျသနျးခဲ့ရပုံတှကေို ပရိသတျတှကေို ပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ ။ ဒါကလညျး
သူ တဈယောကျတညျးတျောနတေတျနလေို့ လုံးဝမဟုတျပါဘဲ ဆရာကောငျး လုပျဖျောကိုငျဖကျကောငျး Team Work ကောငျးလှနျးလို့ သူ မွှောကျစားခွငျးခံခဲ့ရတာပါလို့လညျး ထှနျးထှနျးက
ကိုယျ့ကိုယျကိုနှိမျ့ခရြေးသားထားပါသေးတယျ ။ ပရိသတျတှကေတော့ ဖွဈခငျြတာကို ဖွဈအောငျကွိုးစားနိုငျခဲ့တဲ့ ထှနျးထှနျးအတှကျ ဂုဏျပွုစကားလေးတှေ မှတျခကျြရေးသားထားကွတာတှရေ့ပါတယျ ။